Jamacada USIU oo dacweysay madaxweynihi hore ee dalka – The Voice of Northeastern Kenya
Jamacada USIU oo dacweysay madaxweynihi hore ee dalka
starfmke August 3, 2016
Madaxweynihi hore ee dalka kaas oo hadda siyaasada hawlgab ka noqday,Daniel Torotich Arap Moi ayaa waxa dacwad ka gudbiyay jamacada USIU dacwdaasi oo ku qotomta dhul laisku heysto taas oo la sheegay in u madaxweynahi hore u iibiuyay labo jeer waxana u ka kala iibiyay jamacadan USIU iyo shaqsi lagu magacaabo Dr George Kiongera kaas oo deegan waddanka Maraykanka.
USIU ayaa waxa ay sidoo kale Moi la dacweysay shirkadda Maestro Connections Health Systems Limited iyo madaxa diiwangelinta dhulka waxana ay jamacada dooneysay in ay ogaato sharciga diiwanka ee saxa ah iyado dhulkaas lagu muransan yahay wali la sheegayo in u iska leeyahay Mr Moi.
Maamulka Jamacada ayaa waxa ay sidoo kale ka codsatay Mr Moi in u miiska soo saaro isla markaasina soo bixiyo warqadaha uu canshuurta dhulkaas uu uga bixin jiray tan iyo sanadi 1982-di waxa dhinaca kale Moi lagu eedeyay in u dhulkaas ku helay si sharci daro kadib marki u sheegay in ay ka luntay sabarloogadi asalka ahayd iyadona ugu dambeynti la siiyay sabarloogo kale.
Waxana ammar ay horey u soo saartay maxkamadda ay ku xustay in aan wax dhismo ah an laga dhisi Karin dhulkaasi ee u murunka ka taagan yahay ilaa iyo inti laga soo afjari doono isqab qabsigaas ka taagan lahanshaha dhulkaas oo la sheegay in laga iibiyay jamacada iyo sidoo kale shaqsiga Kiongera.
Maalinta shalay ahayd ayaa waxa u qareen Paul Muite ayaa waxa maxkamadda ka codsaday in ay dadajiso xal u helinta dhulkaas oo u muranka ka taagan yahay maadama oo u ilaa iyo hadda u mugti ku jiro mustaqbalka arday kor u dhaafeysa 5,000 kuwaas oo wax ka barta jamacada USIU.
← Al Shabaab oo lagu eedeeyay in ay si qasab ah ku shaqaaleysinaayan dhalinyarada waddankan Kenya
Magaalada Benghazi oo u qarax weyn oo loo adeegsaday baabur u ka dhacay →